China Nzacha Ọkara Masks FFP2, CE2163 ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Shanyou
1. Otu ojiji naanị ； OA kwadoro site na Notify Isi Universal NB2163, kwekọọ na EN149: 2001 + A1: 2009 FFP3 NR.
2. Akụkụ akụkụ mpịakọta akụkụ atọ, mkpịsị aka imi edozi, yana akụrụngwa na-agbanwe agbanwe dị mma iji kpuchido ntị gị. Nko enwere iji dozie akuku nti.
3. Ihe na-anaghị egbu egbu ma na-adịghị ewe iwe.
4. Ngwunye Ngwunye Ngwunye (PFE): EN 149 ≥94%.
5. Ngwaahịa nwere 4 ma ọ bụ 5 mkpuchi mkpuchi; nye elu urughuru na nje bacteria filtration arụmọrụ.
6. Gbochie nje, uzuzu, pollen, ikuku ikuku, anwụrụ na alụlụ.
7. colors nwere agba dị iche iche.
2. Akụkụ akụkụ mpịakọta akụkụ atọ, mkpịsị aka imi edozi, yana akụrụngwa na-agbanwe agbanwe dị mma iji kpuchido ntị gị. Nko enwere iji dozie akaghị ntị.
3. Ihe na-adịghị egbu egbu na nke na-adịghị ewe iwe ；
4. urughuru Filtration arụmọrụ (PFE): EN 149 ≥94% ；
5. Ngwaahịa nwere 4 ma ọ bụ 5 mkpuchi mkpuchi; nye akwa urughuru na njehie filtration arụmọrụ.
Arụ ọrụ nke urughuru nzacha Ọkara masks: ENkpụrụ EN 149 + A1: 2009, na-akọwa nkọwa ngwaahịa na arụmọrụ chọrọ. A na-anwale ihe masks mgbe edozichara dịka ule ahụ akọwapụtara na ọkwa a ma kpebisie ike ichebe ihe mkpuchi ahụ. E gosipụtara ule dị mkpa na arụmọrụ achọrọ iji mee ihe na nhazi nke nkpuchi na tebụl.
Penetration nke nyo ihe (%) (Max kwere)
Ọnụ ọgụgụ zuru ezu n'ime (%) (ekwe ka Max)
Carbon dioxide ọdịnaya nke ikuku ikuku (%)
Iguzogide iku ume
Oke kwere ekwe (mbar)
30 L / nkeji
95 L / nkeji
160 L / nkeji
FFP2 ihe nkpuchi ihu:
Percentage Pasent filtration nke Aerosol: Ọ bụghị ihe na-erughị 94%.
O esịtidem ihipu ọnụego: kacha elu 8%.
Ihe nkpuchi a na-enye nchebe na mpaghara di iche iche dika ulo oru iko, ihe ndi ozo, ihe owuwu, ulo oru ogwu na oru ugbo. Ọ na - akwụsị kemịkal ntụ ntụ. Nke a nkpuchi nwekwara ike ije ozi dị ka nchebe megide akụkụ okuku ume na nje virus ndị dị otú ahụ dị ka avian influenza ma ọ bụ oké nnukwu akụkụ okuku ume na ọrịa metụtara na coronavirus (SARS), nakwa dị ka megide bacteria nke pneumonic ọrịa na ụkwara nta. O di ka nkpuchi N95.
Ihe nkpuchi EN 149 FFP2 nwere ụdị ọrụ achọrọ ka ndị N95 masks na United States na KN95 na-eresị China. Agbanyeghị nyocha nnwale EN 149 dị iche na nke US / Chinese / Japanese: EN 149 chọrọ nyocha ọzọ nke paraffin-mmanụ aerosol na ọ na-anwale n'ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche na-akọwa ọtụtụ ọkwa jikọtara ma kwere.
Akụkụ: 640 * 410 * 500mm;
Nke gara aga: Nzacha Ọkara Masks FFP3
Osote: Nzacha Ọkara Masks FFP2, CE0598